Amapulazi amazambane eRiphabhlikhi yaseBelarus - umagazini "wePatato System"
Amapulazi amazambane eRiphabhlikhi yaseBelarus
в izindaba, Isifunda
Alexander Rudnikov, iNhloko yeHhovisi eLimele i-GRIMME eRiphabhuliki yaseBelarus
Cishe amathani ayizigidi eziyi-1,1 amazambane atshalwa minyaka yonke emkhakheni wezimboni weRiphabhlikhi yaseBelarus. Womabili amabhizinisi amakhulu (kahulumeni nawangasese) namapulazi amancane, inani lawo elikhula unyaka nonyaka, afaka isandla kulo mphumela.
Isifunda saseVitebsk, isifunda saseTolochinsky
Indawo yasemapulazini - amahektha angaphezu kwama-8 ayizinkulungwane, cishe amahektha angama-900 ngaphansi kwamazambane
Umqondisi - Anatoly Vasilevich Anyukhovsky
Elinye lamabhizinisi amadala kakhulu eBelarus (elakhiwa ngo-1906). Kusukela ngo-2006, bekuyilungu leScientific and Practical Centre yeNational Academy of Sciences for Potato and Horticulture.
Lesi sitshalo senza ukutshala amazambane, okusanhlamvu kanye nembewu kawoyela, kanye nembewu yazo; uqhuba ingadi yezimboni; unezindawo zokuthengisa nezokuphekela; iprosesa enkulu yezolimo: minyaka yonke kukhiqizwa cishe amathani ayi-1 6 wesitashi samazambane, amalitha ayizigidi eziyisithupha amajusi no-nectars, ama-decaliters ayi-810 ayizinkulungwane zezithelo newayini lamajikijolo.
Inkomba "yamazambane" sekuyisikhathi eside ingenye yezimpawu zebhizinisi. Ngokwesisekelo se-Tolochin cannery, izinhlobo ezintsha ziyahlolwa, ezenziwe ngososayensi beScientific and Practical Center yeNational Academy of Sciences for Potato and Fruit and Vegetable Growing; inani elikhulu lamazambane embewu likhiqizwa futhi lithengiswe emapulazini alelizwe.
Ngokuvamile, amathani amazambane angama-45-48 ayizinkulungwane atshalwa lapha minyaka yonke ngesivuno sama-500 nangaphezulu c / ha.
Kusukela ngo-2015, lesi sitshalo sisebenzise ukusebenza okugcwele kokugcina amazambane, sinemishini yokucubungula imikhiqizo ngaphambi kokuthengisa. Ingxenye enkulu yayo ithunyelwa ukuthunyelwa eRussia, futhi isuka e2019 iya e-Ukraine.
Kwikota yokuqala ka-2021, abakwaTolochin cannery bahlela ukusebenzisa isitolo esiqandisa ngokushesha. Lapha bazokwenza amafriji aseFrance ngezinto zabo zokusetshenziswa, besebenzisa ubuchwepheshe bokusungula basekhaya bokubhabha nokubeka isendlalelo esincane (uketshezi olomile nolomile). Umugqa womthamo ungamathani ayizinkulungwane ezingama-3,6 ngonyaka, uma kunesidingo, ungaphindwa kabili. Ukukhiqizwa kuzovumela ngokugcwele izidingo zeriphabhulikhi kulolu hlobo lomkhiqizo nokuthunyelwa kwempahla kwamanye amazwe.
Ipulazi labalimi "Diana"
Isifunda saseMogilev, isifunda saseShklov
Indawo yamapulazi ingaphezu kwamahektha ayizinkulungwane ezintathu, okungama-hectare ayi-3 angaphansi kwamazambane
Inhloko yepulazi - uVladimir Isakovich Malinovsky
Ipulazi iDiana lingenye yezinhlangano ezizimele ezinkulu futhi eziphumelela kakhulu kwezolimo eBelarus.
Ipulazi lasungulwa ngo-Okthoba 1991 nguVladimir Isakovich noSvetlana Stefanovna Malinovsky, igama lebhizinisi lanikezwa ukuhlonipha indodakazi yabalimi. Umsebenzi waqala kumahektha angama-50 omhlaba.
Kusukela ngo-1996, ipulazi laseDiana lafakwa kwiRejista Yombuso Yabakhiqizi, Abaphenyi Bezimbewu Zokusanhlamvu, Imidumba, Imbewu Kawoyela Namazambane.
Namuhla izilimo eziyinhloko zebhizinisi amazambane, ukolweni wasebusika, ukudlwengulwa ebusika. Ipulazi libandakanyeka ekukhiqizeni imbewu yezinhlamvu zasebusika ezidlwengulwe, zasebusika nezentwasahlobo; ipulazi elite lamazambane
Ku-2019, ipulazi iDiana lahlonishwa njengomkhiqizi omkhulu wamazambane eRepublic of Belarus: cishe amathani ayizinkulungwane ezingama-1000 wemikhiqizo atholwe endaweni engamahektha ayi-58.
Ipulazi minyaka yonke likhula izinhlobo eziyisishiyagalombili kuya kweziyishumi ezihlukene zamazambane, zamaqembu ahlukene okuvuthwa. Impumelelo yokukhethwa kweBelarusian neyaseYurophu ivezwa kulayini wezinhlobonhlobo. Isivuno esimaphakathi singama-600 c / ha.
Amazambane wethebula athengiselwa amaketanga aseBelarusian okuthengisa, nakwamanye amazwe (eminyakeni emibili edlule, ikakhulukazi e-Ukraine).
Ipulazi elimpofu "uDiana" ungumnikazi wemishini yanamuhla enamandla, okubandakanya ikakhulukazi abavuni bamazambane be-GRIMME abayisikhombisa. Inkampani inaka kakhulu ukwethulwa kobuchwepheshe "bokulima ngokunemba".
Ipulazi linabasebenzi ababalelwa ku-70; ngesikhathi sokuvuna, inani labo lenyuka laya ku-150.
FH "UGrigory Namadodana"
Isifunda saseBrest, isifunda samaLuninets
Indawo ehlwanyelwe - cishe amahektha angama-500, lawo angamahektha angama-250 abelwe amazambane, kuze kufike kumahektha angama-200 - okherothi, amahektha angama-50 - okwe-beet yetafula
Inhloko yepulazi - uGrigory Alekseevich Bogdan
Leli pulazi lasungulwa ngo-2003 nguGrigory Alekseevich Bogdan. Konke kuqale ngamahektha angama-44. Cishe kusukela ngosuku ibhizinisi elasungulwa ngalo, wonke umndeni womlimi wasebenza emasimini: umkakhe u-Olga Vasilievna Bogdan namadodana amathathu: u-Alexey, uDmitry no-Andrey. Bekufanele baziqonde kahle zonke izigaba zokukhiqizwa kwezolimo "kusuka ku-A kuye ku-Z".
Namuhla ipulazi libandakanyeka ekutshaleni amazambane agqamile, izaqathe kanye ne-beetroot, futhi kuthuthukisa nokukhiqizwa kwembewu: ukukhiqizwa kwamazambane embewu yaseYurophu (Riviera, Colomba, Bernina, Madeira, Queen Anna), kanye nezinhlobo zeBelarusian (Vectar) . Ukugcizelelwa kukhetho lwaseYurophu, ngoba, ngokusho kwabanikazi bepulazi, izinhlobo zaseJalimane nezaseDashi njengamanje zifunwa kakhulu emakethe. Cishe ama-30% endawo abelwe ukutshala amazambane embewu. Isikhathi ngasinye, ipulazi liletha amathani ayi-100-150 wembewu evela eYurophu, okungamathani ayi-40-60 embewu yezinhlobo ezintsha. Ngo-2021, inkampani yathenga amazambane aphakeme ezinhlobonhlobo zeDonata neRicarda.
Imikhiqizo ithengiswa ikakhulukazi kwiRussia Federation (80%), e-Ukraine, eMoldova, kanye nasemakethe yasekhaya.
Ibhizinisi liphethe umugqa ogcwele wemishini yamazambane evela kubakhiqizi abahamba phambili baseYurophu futhi ifakwe izindawo zokugcina zesimanje zemifino (ezinomthamo ophelele wamathani ayi-20 000). Ekupheleni konyaka we-2020, ipulazi lathenga imishini yokuwasha nokupakisha amazambane futhi lihlela ukuyisebenzisa ngoJulayi nonyaka.
Ngokunisela, ikakhulukazi ezindaweni zembewu, kusetshenziswa ukufakwa kohlobo lwesigubhu. Kepha inkampani izothenga imishini eyindilinga kungekudala futhi inikeze ngenkasa kuze kufike ku-60-70% yendawo.
Ipulazi liqashe abantu abayi-15 unomphela, kanti ngesikhathi sokuvuna inani labasebenzi lenyukela kuma-50.
Njengomunye wezinhloko zepulazi, u-Aleksey Bogdan, uyaphawula, amazambane ware awakwazi ukubizwa ngesitshalo esinenzuzo minyaka yonke. Kuyasiza ukuthi inkampani iphinde ikhiqize amazambane embewu nemifino. Ipulazi lizama ukutshala inzuzo evelayo kwimishini nakubuchwepheshe obusiza ukukhulisa isivuno nokuthengiseka.
"Eminyakeni eyishumi nanhlanu eyedlule, ekuqaleni komsebenzi wethu, sakhulisa imikhiqizo esezingeni eliphakathi nendawo," kusho u-Aleksey Bogdan, "ngakho-ke kwakungasho lutho: umthengi wayengalibheki kahle uhlobo lwamazambane, into eyinhloko kwakuwukuthola ivolumu. Kepha njalo ngonyaka umkhiqizo uba nzima ukuwuthengisa, bekufanele sakhe kabusha futhi sishintshe izindlela zethu. Njalo ngonyaka sathuthukisa ubuchwepheshe bethu, sathenga imishini emisha, futhi sethula izinto ezintsha. Imikhiqizo yethu manje ihlangabezana nezidingo eziqinile zemakethe, futhi lesi yisimo esiyinhloko sempumelelo. Uma ingekho ikhwalithi, inzuzo ngeke isatholakala ngokukhishwa kwevolumu, le ndlela ingaholela ekulahlekelweni kuphela. "
Isifunda saseMinsk, isifunda seLogoisk
Umqondisi - Daria Olegovna Nedroshlyanskaya
Indawo ehlwanyelwe - amahektha angama-700, awo amahektha ayi-130 angaphansi kwamazambane
Le nkampani yasungulwa yinhlangano yabalimi baseFrance. Phambilini, bebehlinzeka ngemikhiqizo yabo eRussia, kepha ngokwethulwa kwalokhu kuvinjelwa, ukuhweba bekufanele kumiswe. Osomabhizinisi banqume ukungalahlekelwa yimakethe yokuthengisa nokuvula ukukhiqizwa kwamazambane etafuleni ezweni elinesimo sezulu esikahle nendawo evamile yamasiko neRussia Federation. IRiphabhlikhi yaseBelarus ifane kahle nale mibandela.
Leli pulazi lasungulwa ngonyaka wezi-2015. Umthamo wokutshalwa kwemali ufike ngaphezu kwama-euro ayizigidi eziyizinkulungwane.
Abasunguli bahlanganisa igama lebhizinisi kusuka ezingxenyeni ezintathu: "bel" - kusho iBelarusian; "I-Truf" ihlotshaniswa nesitshalo sezimpande, okungukuthi, okuthile okukhule emhlabathini; futhi "ukuthokozisa" kunjalo ukunambitha.
Namuhla le nkampani ibandakanyeka ekukhiqizeni izinhlobo zokukhethwa kwaseYurophu (iBavaria-Saat, Solana, njll.), Kepha imbewu ithengwa kuphela kubakhiqizi baseFrance. Njengoba kuchaza umqondisi wepulazi uDaria Nedroshlyanskaya, abasunguli bagcizelela kulokhu, ngoba bazi kahle ukuthi abalimi bezinhlamvu baseFrance abakuqaphelayo bakuphatha kanjani ukukhiqizwa kwembewu - kusuka ezindleleni kuya ekugcineni imikhiqizo, bayivikele ezifweni, futhi bagcine ngobuqili obunjengokulungiselela imbewu iyathengiswa (iyilinganisela ngaphansi kosayizi ofanayo), esiza kakhulu inqubo yokutshala nokubala isilinganiso sokuhlwanyela.
Njalo ngonyaka, ukungeniswa kwembewu kugcwele ubunzima obusha. "Sizama ukufeza yonke imibandela," kusho umqondisi webhizinisi ephawula ngale nkinga, "sithatha amasampuli, sidlulise izilimo eziyizigaxa ukuze zihlaziywe futhi sithathe zonke izinhlobo zezibopho zokungathengisi kabusha imbewu noma ukuyithengisa ngokuthunyelwa ngaphandle kuphela, kepha sisazizwa singaphephile ngoba asazi ukuthi kuzokwenzekani. ngonyaka ozayo ".
Ekuhlelweni komsebenzi, ipulazi nalo liholwa yizibonelo zaseYurophu. “Abasunguli bethu banemininingwane eminingi ngomsebenzi wabo, yonke into encane, yonke imininingwane ibalulekile kubo, baphatha amazambane njengeqanda futhi bafuna okufanayo nakithi. Lokhu kubaluleke kakhulu uma ugxila kwikhwalithi ngaphezu kobuningi, ”kwengeza inhloko yenkampani.
Ukushintshaniswa kwezitshalo kusebenzisa okusanhlamvu, okudlwenguliwe kanye nommbila, okuvumela ipulazi ukuthi lisebenzise umhlaba ngendlela efanele futhi libuyele ensimini namazambane njalo eminyakeni emine.
Kusukela onyakeni wokuqala wokusebenza, ipulazi lethule imishini yokunisela. “Ukunisela kunezela cishe amathani angama-20 ehektheleni ngalinye kithi,” kuphawula uDaria Nedroshlyanskaya, “futhi ngenxa yokuthi isimo semvula asizange sizinze kule minyaka emithathu edlule, ukunisela kusindisa isimo.”
Ngesikhathi somsebenzi, iqembu lebhizinisi selivele lithole izivuno eziyisithupha. Ekuqaleni, kwakukhule izinhlobo ezintathu kuphela zamazambane, bese ulayini wanwetshwa waba yisithupha.
Ukukhethwa kwezinhlobonhlobo kusekelwe ezidingweni zabathengi, ngaphezu kwalokho, isivuno, ukufaneleka kokulinywa esifundeni esinikeziwe (ubukhulu bepulazi inhlabathi ye-peat), kanye nokucatshangelwa kwezifo kuyabhekwa. Ezinye izinhlobo ziyakhishwa ekukhiqizweni uma ulwazi ngazo lungaphumelelanga, imikhiqizo emisha yethulwa minyaka yonke ukuyifaka esikhundleni sayo.
“Sibe nokuhlolwa okuthakazelisa kakhulu,” kusho umqondisi wepulazi, “ngenkathi singenisa izinhlobo ezingabhalisiwe eRiphabhuliki yaseBelarus ngemvume ekhethekile evela eMnyangweni Wezolimo: ngokwesibonelo, uSheri, uSissi (ngaphansi kwesibopho sokuthengisa konke amazambane asekhulile angathunyelwa kwamanye amazwe). Sithole imiphumela emihle ngaleso sikhathi. ”
Iningi lomkhiqizo wepulazi lithunyelwa kwamanye amazwe. Izinkomba eziyinhloko yiRussian Federation, iMoldova, i-Ukraine, iSerbia, neGeorgia. Izicelo zamukelwa kwamanye amazwe, kepha angikaze ngibe nokuhlangenwe nakho ngazo okwamanje. Umthamo wezimpahla ezweni ngalinye uyashintsha minyaka yonke ngezizathu ezizwakalayo. Ngonyaka odlule kube nesivuno esihle eRussia, kanti ipulazi lathumela izimoto eziyi-10-15 kuphela lapho, futhi kulo nyaka ukugeleza okuyinhloko kwabakhulile kuya lapho.
Le nkampani ifakwe imishini yokuwasha nokupakisha amazambane (kusuka ku-1 kuye ku-25 kg) futhi izama ukuthengisa amazambane anenani eliphakeme kakhulu elengeziwe.
Singasho ukuthi ipulazi ngokuzethemba lithatha indawo yalo emakethe. “Ekuqaleni kwakunzima kakhulu kithina,” kukhumbula uDaria Nedroshlyanskaya, “kodwa manje sesinamakhasimende“ ethu ”. Impela kunomncintiswano, kepha lokhu kuhle kakhulu kunokubi. "
Le nkampani icabanga ngokwanda komkhiqizo, kepha ayikakulungeli ukudlulela kulesi sinyathelo kuze kube yilapho inkinga yokwandiswa kwesikhala sokugcina isixazululiwe, futhi lokhu kudinga ukutshalwa kwezimali okukhulu. “Manje sizwa ukwanda kwesidingo, intengo iyakhula,” kusho inhloko yebhizinisi, “ngezikhathi ezinjalo, uzisola nje ngokuthi ayikho indawo yokugcina lapho ungabeka khona amazambane amaningi, ngoba insalela kumele ithengiswe ekuqaleni kwesizini ngemali ephansi ”.
Kufinyeta imiphumela yalokhu kubuyekezwa okuncane, kungaphawulwa ukuthi abalimi bamazambane baseBelarus babhekana nobunzima obufanayo nobaseRussia: kunezinkathi lapho imboni ihlushwa izinhlekelele zezulu kanye nokwehluleka kwezitshalo; kepha iminyaka yokukhiqiza ngokweqile nezinkinga zokuthengisa ziba nzima kakhulu. Wonke umuntu unendlela eyodwa yokuphuma: ukwenza ngcono ubuchwepheshe bokutshala, ukusebenzela ukuthola umkhiqizo osezingeni eliphakeme ohlale ufuneka emakethe.
Tags: amazambane akhulaIRiphabhuliki yaseBelarusGRIMME Imishini
Kuhlela ukuthi kufinyelele kuma-ruble ayizigidi eziyi-140 azonikezwa izikhungo ezintsha zezolimo
Amasheya embewu yamazambane azokwakhiwa e-Uzbekistan
Amazambane avulekile kanye nemifino kwaqala ukutshalwa esifundeni saseMoscow
Izinhlobo zamazambane esifundeni sase-Amur
ISonto Lwezolimo laseSiberia lizoba ngoNovemba eNovosibirsk
Kuzoba namafries amaningi aseFrance akhiqizwa eRussia. Ngamathani ayizinkulungwane eziyikhulu ngonyaka